Thwebula AnTuTu Benchmark 6.2.6 – Vessoft
Thwebula AnTuTu Benchmark
AnTuTu Benchmark – a software ukuhlola zonke nemingcele main of the device Android. Isofthiwe uhlola ukusebenza wokugaya, inkumbulo tekusebenta, battery kanye izinzwa ezahlukene e umphumela lapho ubonisa ulwazi mayelana idivayisi. AnTuTu Benchmark kusebenza a test ekhethekile ukuze kutholakale izinga processing usebenzisa 2D futhi 3D idivayisi ihluzo. Ngemva ukuhlolwa, isofthiwe ubonisa ukuhlolwa jikelele zedivayisi futhi kwenza ukuba uqhathanise imiphumela namanye amadivaysi models. Futhi AnTuTu Benchmark kwenza ukuqhuba eziningi nolunye uvivinyo ukusebenza idivayisi ngokuxhuma anezele ehlukahlukene.
Hlola of the ukusebenza kwemigomo main of the device
Ibonisa ulwazi mayelana idivayisi
Ukuhlola izinga processing 2D kanye 3D ihluzo
Ukuqhathanisa kanye namanye amadivaysi
Amazwana on AnTuTu Benchmark:
AnTuTu Benchmark Ahlobene software:
English, Español, Deutsch, 中文... CPU-Z 1.19
English, Українська, Français, Italiano... SHAREit 3.5.48_ww
English, Afrikaans, Français, Español... UC Browser 11.0.8.885